खेलकुद – NRN Khabar
नेइमारको पक्षमा बोले पिएसजी प्रशिक्षक
काठमाडौं । फ्रान्सेली च्याम्पियन पेरिस सेन्ट–जर्मेन पिएसजी का प्रशिक्षक थोमस टुसिलले नेइमार पूर्ण रुपमा क्लबमा समर्पित रहेको बताएका छन् । लिग वान अन्तर्गत आइतबार राति भएको खेलमा नेइमारले ८७ औँ मिनेटमा गरेको गोलको सहयोगमा पिएसजीले लियोनमाथि १–० को जित निकाल्यो । यो जित र त्यसमा नेइमारले गरेको
काठमाडौँ, ४ असोज । जोर्डनमा जारी एएफसी यू–१६ च्याम्पियनसिप छनोटको तेस्रो खेलमा ताजिकिस्तानले नेपाललाई फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको छ । शुक्रबार भएको खेलमा नेपाल ताजिकिस्तानसँग ७-० गोलको फराकिलो अन्तरले पराजित भएको छ । ताजिकिस्तानले ३ खेलबाट ९ अंक जोडेको छ । ३ खेलमा दुई हार व्यहोरेको नेपालको १ अ
काठमाडौँ, २६ भदौ । क्यारिवियन प्रिमियर लिग (सीपीएल) क्रिकेटमा सन्दीप लामिछानेले तीन विकेट लिएका छन् । बिहीबार बारबारडोस त्रिडेन्ट्समा सन्दीपले सेन्ट किट्स एन्ड नेविस प्याट्रिवट्सविरुद्ध खेलमा तीन विकेट लिएका हुन् । सन्दीपकै उत्कृष्ट प्रदर्शनमा बारबारडोस प्याट्रिवट्सविरुद्ध जित नजिक छ । तर वर्षा
काठमाडौं । किर्गीस्तानमा जारी नादेझ्दा कप फुटबलको दोस्रो खेलमा नेपाल उज्वेकिस्तानसँग पराजित भएको छ । काराकोलस्थित सेन्ट्रल स्टेडियममा आज भएको खेलमा नेपाल उज्वेकिस्तानसँग २–० ले पराजित भएको हो । पहिलो हाफमा एक गोल खाएको नेपालले दोस्रो हाफमा थप अर्को गोल खादै पराजित भएको हो । खेलको ३४ औं मि
काठमाडौं- श्रीलंकामा जारी एसीसी यू–१९ एसिया कप क्रिकेटको आजको खेलमा नेपालले बंगलादेशविरुद्ध व्याटिङ गर्ने भएको छ । कोलम्बोमा बंगलादेशले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि नेपालले पहिले व्याटिङको निम्तो पाएको हो । पहिलो खेलमा नेपाल घरेलु टोली श्रीलंकासंग डीएल पद्वतीका आधारमा ५ विकेटले पराजित भएको थियो ।
काठमाडौँ, १८ भदौ । सन् २०२२ मा कतारमा हुने फिफा विश्वकपका लागि आधिकारिक लोगो सार्वजनिक गरिएको छ । गल्फ राष्ट्रको संस्कृति र गल्फ राष्ट्रको मरुभूमिलाई प्रस्तुत गरिएको लोगो फिफाले मंगलबार राति सार्वजनिक गरेको हो । लोगोमा मिडिल इस्टको मरुभूमीका साथै आठ वटा देशलाई समेटेको छ । कतारको स्वतन्त्रता
काठमाडौं । पोखरामा सम्पन्न भएको प्रथम महिला तथा पुरुष खुल्ला प्रेसिडेन्ट च्याम्पियनशिप प्रतियोगितामा नेपाल क्योकुशिन कराते संघ (ईको) का महिला खेलाडी मन्जु बि.क. ले उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गरि स्वर्ण पदक हासिल गरेकि छन । उक्त खेलमा उनले नगद रू. १,००,००० एक लाख रूपैयाँ पुरसकार समेत हात पारेकी हुन
काठमाडौँ । भारतमा सम्पन्न आइपिएस (इन्डियन पुलिस सर्भिस) तालिम २०१७ मा नेपाल प्रहरी उत्कृष्ट भएको छ ।नेपाल प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक कृष्ण खड्का उत्कृष्ट बाह्रय प्रशिक्षार्थी हुन सफल भई ‘आइपिएस एशोसियसन्स अफ सोर्ड अफ अनर’ बाट पुरस्कृत भएका छन् । उक्त तालिममा प्रहरी निरीक्षक अनु लामा ‘वेष्ट लेडी आ